သတင်း - စက်မှုဘက်ထရီအားသွင်းကိရိယာထုတ်လုပ်သူ
Hangzhou Qingyuan Medica Hangzhou Qingyuan Medical Equipment Technology Co.,Ltd isasubsidiary of Hangzhou AODI Electronic Co.,Ltd.Due to the COVID-19, we are taking full advantage of the advanced technology and SMT,DIP,Production ability to produce the infrared thermometers. Same company, same ...ဆက်ဖတ်ရန် »
We are back to work today. Welcome your visiting! Thanks~ ဆက်ဖတ်ရန် »
Happy New Year 2020, all the best~ Wish you all haveaprosperous,healthy and peaceful new year! AODI wanna be your strategic partner at the charging applications. ဆက်ဖတ်ရန် »
Merry Christmas~Happy Holidays~ Wish you all the best! ဆက်ဖတ်ရန် »
9th Dec, we welcomed the5members from Dana Incorporated Canada branch. Dana isapremier provider of traditional and electrified driveline components and systems, as well as tire pressure management solutions, for medium- and heavy-duty commercial vehicles. Dana’s Commercial Vehicle business un...ဆက်ဖတ်ရန် »
Our president Mr Roger Feng and AODI’ management team hadapleasant meeting with Mr President Min Zhu from Cybernaut Investment and deputy director Yanping Wan from Xiaoshan District Economic and Trade Bureau on 19th Nov. Mr Zhu is one of the Chinese partners of the US NEA venture capital fund...ဆက်ဖတ်ရန် »
Happy Mid-Autumn Festivals! Mid-Autumn Festival hasahistory of over 3,000 years, dating back to moon worship in the Shang Dynasty (1600–1046 BC). It’s such an important festival that many poems were written about it, stories and legends about the festival are widespread, and its origins have be...ဆက်ဖတ်ရန် »
Last day of March, makingafree day to haveavery meaningful spring outward bound in the suburb of Hangzhou with beautiful mountains and river surrounding. Half of our staffs were joined in this exercise due to the work.10 teams to get the score through finishing the tasks which to obtain the l...ဆက်ဖတ်ရန် »
Happy Valentine’s Day! ” So warm to get the rose from our boss, while we arrived the company, we are finding our boss at the entrance were sending the rose to each lady”! ဆက်ဖတ်ရန် »
Congrats AODI is awarded the “ ZHEJIANG Top Manufacturing Brand”,the No.20 from 223 brands (refer:https://mp.weixin.qq.com/s/rIIlOj3512Vhx1PxcVmnUA).AODI is striving on” High Quality Products,Most Considerate Service,Professional Team” ဆက်ဖတ်ရန် »
Fresh Start, we are back to work.-12th Feb 2019 ဆက်ဖတ်ရန် »
Dear customers, At this special moments,we would like to take this chance to extend our warmest wishes for you and your families. May the Chinese New Year be filled with warm, peace,happiness and joy!!! ဆက်ဖတ်ရန် »
We hadahappy time at this Annual End Event, our motto is” AODI Dream is my dream”. Big Dreams’ come true leads the small dreams, small dreams are gathering the big dreams. Let’s do in 2019 year! ဆက်ဖတ်ရန် »
Dear customers, At this special moments,we would like to take this chance to extend our warmest wishes for you and your families. On behalf of AODI,thank you for your fully supports during the past years and we look forward to working with you soon and provide our best service in the coming years. ဆက်ဖတ်ရန် »
AODI Lab က
အချိန် post: 07-16-2018
ကျွန်ုပ်တို့၏ဓာတ်ခွဲခန်းဟန်ကျိုးဌာနချုပ်မှာအတွက်, ဒါပေမယ့်လည်းရှန်ကျန်းသတ်မှတ်မသာ။ ကျွန်တော်တို့သည် Input အားလျှပ်စစ်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုစမ်းသပ်ပြု Output လျှပ်စစ်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုစမ်းသပ်, တိုက်နယ်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးစမ်းသပ်မှု, စို Cycle စမ်းသပ်မှု, ဓာတ်လှေကားစမ်းသပ်မြင့်မားအနိမ့်ဗို့အားစမ်းသပ်ခြင်း, ဆားရေမှုံရေမွှားစမ်းသပ်မှု, သိုလှောင်ရေးဘဝကစမ်းသပ်, Thermal Shock ကစမ်းသပ် Vibratio enable ...ဆက်ဖတ်ရန် »
ကားစက်ရုံတွေအတွက်အကောင်းဆုံးအရည်အချင်းပြည့် OEM ပေးသွင်း Be
အချိန် post: 06-25-2018
အဆိုပါလျှပ်စစ်ကားများ '' စက်ရုံတွေအတွက်အကောင်းဆုံးအရည်အချင်းပြည့် OEM ပေးသွင်း Be, AODI3တွေ့ဆုံရန်2မှ4လိုင်းများ, စိတ်ကြိုက်အလိုအလျှောက်စမ်းသပ်ကိရိယာများ, ဓာတ်ခွဲခန်းနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ် Smt နေရာချထားစက်ကနေအသိဉာဏ်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းများတိုးချဲ့နှင့်ချုပ်လုပ်အိုမင်းခြင်းဟာပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲခဲ့သည်0...ဆက်ဖတ်ရန် »
ရှန်ကျန်း R & D Center က
Shenzhen is the electronic city in China, conducive to attracting talent and power electronics knowledge. So we decided to start the R&D Center in Shenzhen. ဆက်ဖတ်ရန် »
တရုတ်အော်တိုအစည်းအရုံးသစ်ကိုစွမ်းအင်မော်တော်ယာဉ်ထုတ်လုပ်မှုသြဂုတ်လအတွင်းက 82% ၏တစ်နှစ်တိုးအပေါ် 4.2 သန်းမှတစ်နှစ်မြင့်တက်
(အကျဉ်းချုပ်) သြဂုတ်လများတွင်စွမ်းအင်သစ်ယာဉ်များထုတ်လုပ်မှုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အလားတူကာလနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ 81.5% နှင့် 92.2% ၏တိုးတက် 38,000 ယူနစ်တစ်ခုရောင်းအားအသံအတိုးအကျယ်နှင့်အတူ 42,000 ယူနစ်အထိရောက်ရှိခဲ့သည်။ စင်ကြယ်သောလျှပ်စစ်ခရီးသည်ကားများနေဆဲစုစုပေါင်းရောင်းအားအသံအတိုးအကျယ်နှင့်အ 23,000 နှင့် 2.2 ထက်ပို 50% များအတွက်အကောင့် ...ဆက်ဖတ်ရန် »
2018 AODI နွေအပြင်ခညျြနှောငျ
အချိန် post: 04-25-2018
Build stronger team to work together in glory ဆက်ဖတ်ရန် »
AODI 2017 နှစ်ပတ်လည်ပွဲ
2017 AODI Annual Party was perfect finished on 31th evening. It was the great moments for AODI people with the hopeful, happiness, gratefulness…… Best wishes for all of us in 2018, Be Better, Be Stronger~ Let us get back the wonderful moments: Entrance sign Opening Show Leader Speec...ဆက်ဖတ်ရန် »
AODI မိသားစုသငျသညျအကြှနျုပျတို့ကို join ကြိုဆိုပါတယ်
အချိန် post: 01-01-2018
, အသည်းအသန်တက်ကြွသော, တာဝန်ရှိသည့်စိန်ခေါ်မှုယူဆန္ဒရှိနေသောလူများ, အမြဲတမ်း AODI မိသားစု join ဖို့ကြိုဆိုပါတယ်နေကြသည်။ AODI ငယ်ရွယ်ကုမ္ပဏီပေမယ့်ကောင်းသောဆက်သွယ်ရေးနှင့်အတူခိုင်မာတဲ့ကွပ်မျက်, ဒဏ်ငွေစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရည်အသွေးနှင့်နွေးထွေးသောအသင်းအလုပျသမားဖြစ်ပါတယ်။ ဆက်ဖတ်ရန် »
အချိန် post: 12-16-2017
To meet the customers’needs, we have3production lines, with Professional SMT placement machine, and wave soldering equipment that up to the 30000unit monthly capacity until the end of 2017 year. &nbsp...ဆက်ဖတ်ရန် »
AODI က "XIAOSHAN စက်မှုငွေကြေးကိစ္စများသုတေသနပြု Match အစည်းအဝေး" ကိုတက်ရောက်
အချိန် post: 03-25-2017
ကျနော်တို့ G-20 ထိပ်သီးအစည်းအဝေးပြီးနောက် Xiaoshan ခရိုင်အစိုးရအားဖြင့် Xianghu ရေကန်တွင်ကျင်းပသော "XIAOSHAN စက်မှုငွေကြေးကိစ္စများသုတေသနပြု Match အစည်းအဝေး" သို့တက်ရောက်ရန်ဖိတ်ကြားထားပါသည်။ ဤအစည်းအဝေးတွင်အစိုးရ, သိပ္ပံတရုတ်အကယ်ဒမီဒါပေမယ့်လည်းဒေသခံလူသိများတဲ့အီးကိုစုဝေးစေမသာ, မြင့်အဆင့်ဖြစ်ပါတယ် ...ဆက်ဖတ်ရန် »
AODI အားသွင်းကိရိယာအောင်မြင်စွာ Equity ချိန်း, သစ်စတင်, တစ်ပြောင်ပြောင်တောက်သော AODI အတွက်စာရင်းပေါက်။
အချိန် post: 06-25-2016
မကြာသေးမီကဟန်ကျိုး AODI လျှပ်စစ်ထိန်းချုပ်ရေး Co. , Ltd အောင်မြင်စွာ Zhejiang Equity ချိန်းများတွင်စာရင်း။ ကျနော်တို့စွမ်းအင်သစ်လျှပ်စစ်မော်တော်ယာဉ်များအဘို့အဦးဆောင်အဆင့်မြင့်နည်းပညာလုပ်ငန်း, 2010 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးနေကြသည်။ အမျိုးသားဆန်းသစ်တီထွင်မှုရန်ပုံငွေအဖွဲ့ရဲ့ supporting အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးအဖြစ်ကျနော်တို့တည်ငြိမ် qua ထုတ်လုပ်ကျူးလွန်နေကြသည် ...ဆက်ဖတ်ရန် »